Home / How to Choose Best College for You
မိမိနဲ့ အသင့်လျော်ဆုံးကျောင်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ?
“ပညာရေး” ဆိုတာ ယနေ့ခေတ် လူကြီး လူငယ်တွေကြားမှာ အရေးပါလာတဲ့ စကားလုံး အဖြစ် ရပ်တည်လို့လာပါပြီ။ လူငယ်အများစု ကိုယ်တိုင်ကလဲ ပညာရေး ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလာကြပြီး ကိုယ့် Educational Pathway တွေနဲ့ Career Lifestyle တွေကို ကိုယ်တိုင် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်နေကြတာမျိုးတွေ မြင်ရတာ တကယ်ပဲ အားရကျေနပ်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တွေက တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်ပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့အမျိုးမျိုးကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေက ပိုမို များပြားလှတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ပြဿနာက ဒီလို ရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်တဲ့ ကျောင်းတစ်ခု ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ? ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေရင် ရွေးချယ်တက်ရောက်သင့်တဲ့ ကျောင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ရပြီလဲ? ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျောင်းကို ဘယ်လို စဉ်းစားရွေးချယ်ရမလဲ စတဲ့ ဒွိဟတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရခက်တာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ဒီလို ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဘယ်လို ဖြတ်ကျော်သင့်လဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
ကိုယ်တက်ရောက်လိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ချရေးကြည့်ပါ။ ဘယ်ဘာသာရပ်အတွက် ဘယ်ကျောင်းက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒီလို Shortlist လုပ်ရာမှာလဲ ကိုယ့် Priorities အလိုက် အစီအစဉ်တကျ ချရေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ် အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံး၊ ကိုယ်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးကျောင်းက ဘယ်တစ်ခု ဖြစ်မလဲ လေ့လာသုံးသပ်လို့ရမှာပါ။
ဒီဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဒီကျောင်းကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းကို သဘောကျလို့ ဒီဘာသာရပ်ကို တက်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ အမှန်တကယ် ဝါသနာလဲမပါ၊ စိတ်လဲ လုံးဝမ၀င်စားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်တက်ရောက်လိုက်တဲ့ အကျိုးဆက်က ကိုယ့် Career Pathwayမှာ ထင်ထားတာထက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တချိန်မှာ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဆိုတာ သိပါစေ။
ကိုယ်က ဘာကြောင့် ဒီနယ်ပယ်ကို ရွေးချယ်တာလဲ? နောက် လေး ငါး နှစ် ကြာတဲ့အခါ ကိုယ်က ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ ? ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ဝမ်းစာ ပြည့်ဝနေပြီး သင့်တော်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုနဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ အခြေတကျ ဖြစ်ချင်တာလား ? ကိုယ့်မှာ သေချာတဲ့ အဖြေတစ်ခုရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဒီလို အခြေအနေတစ်ခု ရောက်အောင် လမ်းညွှန် သင်ပြပေးနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး ကျောင်းက ဘယ်ကျောင်းဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကိုယ်တို်င် လေ့လာပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းတွေရဲ့ Event တွေ တက်ရောက်ပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျောင်းတိုင်းလိုလိုက Seminar တွေ၊ Workshop တွေ Free Trial Class တွေအပြင် Game Activities တွေပါ စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းအခမဲ့တက်ရောက်နိုင်အောင် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးနေပါပြီ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျောင်းက ဒီလို Event တွေ လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာပါ။ ဒီလိုသွားခြင်းအားဖြင့် ဒီကျောင်းရဲ့ Environment နဲ့ Learning style တွေက ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ တွေ့မြင်လာမှာပါ။
ဘ၀ တဆစ်ချိုးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကို အလျှင်အမြန် မချသင့်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်လဲ ဆွဲပြီး မစဉ်းစားမနေသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်လဲ အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီနဲ့ ကျောင်းမျိုးကိုတွေ့တဲ့အခါ လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ပါ။
အချိန်ကုန်ခံ ငွေကုန်ခံ အင်အားတွေ အကုန်ခံပြီး ကိုယ့် ဘဝအတွက် ရွေးချယ်တက်ရောက်မယ့် ကျောင်းက ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ Upgrade လုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေ Career Life ကို လျှောက်လှမ်းရာမှာရော ဘယ်လောက်ထိ Support လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်း စဉ်းစားပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။